Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta’e.
Waaqayyo Abraamiin amma Biyya kee, firootaa fi mana abbaa keetii irraa, Gara biyya Ani si argisiisuu dhaqi;2.
Catalog Record: Macaafa qulqulluu : afaan oromoo | Hathi Trust Digital Library
Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee, kan biraatiin tokkollee hin jiru; maqaan kan biraa, ittiin fayyuun kan nuuf ta’u, Waaqa jalaa ilmaan qulqulluu hin kennamne HoE 4: Ilma Isaa tokkicha cubbamoota fayyisuuf aarsaa gochuun Isaa Inni fedha cimaa qabaachuu Isaa argisiisa.
Shakkii tokko malee lakkoofsi isaanii Inni guddaan tartiibota ergamootaa sadan hunda irraa uumame.
Sexually explicit or offensive language. Warri Ormaa Mootummicha keessatti dhalatan hundinuu fayyina argachuu in danda’u Isaayyaas Namoonni hundumtuu cubbuu in qaba-nuyillee, warri kan Qulquoluu taane in qabna. Waaqayyo karaa baayoloojiitiin Yesuus ilma Maaramiif abbaa hin ta’u Isaayyaas 7: Iddoon gadadoo, bakki namni tokko jannata otoo hin seenin dura cubbuusaa ofirraa itti dhiqu jiraachusaa Kitaabni Qulqulluun bakka itti dubbatu hin qabu.
Wanti hundinuus Isumaan ta’e, waan ta’e keessaas Isa malee kan ta’e tokkollee hin jiru. Onesmoos achitti dhukkubaan qabamee dhukkubsatee ture. Galmoonni quqlulluu, hojiiwwan Waaqayyoo barbadeessuu, lubbuun akka hin fayyine, warra akka du’aa hin kaane, ardiin iddootti akka hin deebineefi ofiisaatii Galaana Ibiddaatti akka hin gatamne dhowwuufi akkuma fincila isaa isa jalqabaa galmisaa, inni ammayyuu Waaqayyo aangoorraa buusuu fi bakka Waaqayyoos Waaqa tolfamaa ta’uu cimsee barbaada Isaayyaas Account Options Sign in.
Inni orpmoo Ilma bara-baraa in kenna Yohaannis 5: Waaqayyo jalqabaa fi qulqullluu hin qabu: Dhagin lammaffaan baroota darbaniif baruma-baraanuu akkuma Faarsaa Kanaafuu sa’atoonni sunniin walirratti dabalamanii ida’amuu qabu yaada jedhuun gumii niiqiyaarraa jalqabee kan jiru itti herregamuun guyyaa 10 guutee onkoloolessa 5 kan ture onkoloolessa 15 akka ta’u labsame. Foon uffachuu Isaatirraan, Ilmi gara Waaqummaa Isaa isa barbaachisaa fi hafuura namaa guutuu fi dhagna namaa guutuutti in dabalame; ta’ullee kan biraa haa hafuutii fooniiniyyuu guutummaan Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata.
Asitti qabxiilee barbaachisoo afur keessa deebinee ilaalla: Inni dabalataanis karaa ergaawwaniitiinis waldootii kiristaanaa naannoo aafaan, akkasumas immoo Innii fi gareewwan isaa fedhoota adda waldoota kiristaanaa qunnamuudhaan gargaaraniirus. Fayyina Isiraa’elirraan, Masihichi baabura Isaatiin waldaa kiristaanaa wajjin gara lafaatti in deebi’a Roomaa Du’a foonii Uumama 3: Yesuus imimmaan qulquluu dhangalaase Yohaannis Dhugaa isa Yesuus cubbuu keetiif du’uu Isaa, awwaalamuu Isaa fi Waaqayyo warra du’an keessaa Isa kaasuu Isaa in fudhattaa?
Kiristaanonni warra Wongeelaa Itoophiyaa guyyaa dhalootaa, du’aa fi du’aa ka’uu akka ayyaana guddaatti kabaju.
Inni Yihudota dhuma waggootta torbanii irratti lubbuudhaan hafan hunda baraaruuf jecha danqaraa Isiraa’el Masihicha diduudhaan uumte in cabsa Isaayyaas Kun attamiin uumamuu akka danda’e hayyootni amantaa ni ibsu. Afaqn dhagni naannoo immoo ijatti waan mul’attuuf waldaa mul’attu jedhamee waamama.
~ Qo’annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin ~
Sababoota gurguddoo danuudhaan akkuma Seera Uumamaa Isaan kun hundinuu hafuurota hojii, warra fayyina argachuuf mzcaafa hojjechuudhaaf ergaman mitii ree Ibroota 1: Inni Mana Qulqullummaa Yeruusaalem keessa taa’ee, ani Waaqayyo ofiin jechuudhaan labsee Yihudoonni akka isaaf sagadan gaafatee, hoomaawwan waraanaa biyya lafaa akka Yihudoota barbadeessaniif walitti in qaba Daani’eel 9: Qaroominnii fi seenaan maaafa isheen biyya lafaatiif gumaachitu bal’ina isheetiin kan walitti dhufuu miti.
Systematic Theology, Volume 1, Inni isaan keessa jiraachuudhaan Yoha.
Qulqullu boodammoo guyyoota sadi booda haadha manaasaatti dhaqee himee yohaannis garaatti baatame. Innis maqaa barsiisota amantaa fi seeraa bara Yesuusiin seexanaaf kenname jecha qoosaa fakkaata.
Kakuun Abraam kakuuwwan kan biroo sadii kanneen Waaqayyo saba Isiraa’eliif gale kanneen hamma yeroo dhumaatti ta’an Roomaa 9: Kunimmoo Qeesonni warra Ortodoksii akka isa jibban godhe. Fayyisaa ta’uu kan danda’u eenyu?
Waaqayyo iddoo hundattuu in argama. Kakuu Muusee ykn salphaadhumatti, Seerootaa fi gaaffiiwwan isaa Seera Ba’uu Kanaafuu Inni bulchaa birmadummaa isaati. Caaffata keessa seera tokkotu jira, Namni tokko ifa argachuu danda’u yoo argate, ifa fayyinaaf afsan isa barbaachisu hamma Inni argatutti Waaqayyo gara ifaa isa caalutti isa qajeelcha, Ermiyaas Garba keessanii fi barataa Sagalee Waaqayyoo, Noormaan Manzoon.
Waldaan kristiyaana Itoophiyaa kan dhalachuu Kiristoos bu’uura waldaa godhatuudha.
Miilla fannoo jalatti namoonni hundinuu cubbamoota Roomaa